अरुसि मगर नेपालीको मन मुटुमा - Janapukar
प्रवास अमेरिका समाचार साहित्य भिडियो विचार हास्य टेलिचलचित्र सम्पर्क अरुसि मगर नेपालीको मन मुटुमा नेपाली सांगीतिक छेत्रमा छोटो समयमा सफल मोडेल तथा डान्सर अरुसि मगर उनि सानै उमेर देखि सौखिन डान्सर हुन् उनले बाँके जिल्लाको आडीएलमा टप भएर शंकर बिसीको सहयोगमा काठमाडौँ आएकी थिईन । उनी मोडेल तथा डान्सर अरुसि मगर संग गरिएको कुराकानी अरुसि जी, हजुर को एस क्षेत्रमा कहिले बाट यात्रा सुरु गर्नु भयो ?
- गित संगीत मेरो सानै देखिको रुचीको बिषय हो तेही सिलसिलामा बाँके जिल्लामा भएका सबै मोडल हरुमा भाग लिदै टप भएकि थिय अहिले ७ महिना जति भयो मा अहिले काठमाडौँ मा बस्छु ।
- सबैभन्दा पहिलो कुरा के भने- म मोडल र डान्सर मात्र मेरो अहिलेको रोजाई हो तर भबिस्यमा आफै भीडियो बनाउने योजना छ । अरुसि जी, कलाकारहरुमा कला गला डान्स मोडल राम्रो हुदाहुदै पनि यो क्षेत्रमा लामो समय नटिकेको भन्ने सुन्न आउछ नि ?
- यो क्षेत्रमा लागि सके पछि निरन्तरता दिनु पर्छ एउटा काम गर्ने छोड्ने गर्नु राम्रो हैन तर पनि तेरो र मेरो अनि हाम्रो भन्दा तेस्तो बनाएको हुन् सक्छ । कलाकारहरु एक दुई बटा एल बम हरुमा खेली सकेपछि बिदेशहरुमा गएका हुन्छन त कति त फर्कदैनन नि ?
- सबैलाई तेस्तो भन्न नमिल्ला तर पनि यो लाईन भनेको आफ्नो मान्छे लाइ मात्र अलि जोड लिने र दिने हुन्छ । कला र गला आफ्नो प्रस्तुति दिने कलाकार हरुको लागि राम्रै छ बिदेशमा भएको कार्यक्रम मा जानु नराम्रो हैन तर गुमनाम हुनु हामी कलाकारको लागि दु:खदायी नै हो । अरुसि जी, लाइ एस क्षेत्रमा आगाडी बढाउन कसैको मद्धत पाउनु भयो कि ?
- म कहिल्यै बिर्सन सक्दिन सुरुमा त मलाई मेरो आमा ( रुपा अस्लामी मगर ) हो वहाले यो क्षेत्र मा लाग्न प्रोत्साहन दिनु भयो र पछि सबै परिवारको सहयोग मिल्यो। अहिले आएर भन्नु पर्दा शंकर बिसी ले काठमान्डौ आउन र एस छेत्रमा सहयोग गर्नु भएको छ वहाको पनि देन छ । अरुसि जी, सांगीतिक क्षेत्र सगै आज युएईको दुबईमा आउनु भएको छ ? कस्तो लागिरहेको छ ?
- राम्रो लागेको छ खुसि छु दुबईको ईम्पिरियल सुईट होटलमा ३५ ओं मगर दिबशको अबसरमा नेपाल मगर संघ युएईको निमत्रणा तथा टंक थापा मगरको सहयोगमा यहा आएर पनि मैले डान्स प्रस्तुति गर्न पाउनु मेरो लागि खुसिको कुरा हो सबै दर्सकहरुले रुचाई दिनु भयो सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । अरुसि जी, अन्तमा दर्सकहरुलाई केहि भन्न चाहनुहुन्छ ?
- सबैभन्दा पहिला त हजुरलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु दुई सब्द राख्ने समय मिलाईदिएकोमा ।
साथमा देश तथा विदेशमा रहनुहुने मेरो बुबा आमा दाजु-भाइ दिदीब-हिनी साथी-भाइ माया गर्नु हुने सम्पूर्ण सबैलाई आफ्नो ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरिदिनु होला। आशा छ भोलि मैले आफ्नै भिडेओ निकाल्ने सोच राखेकी छु तपाईहरुले हेरेर राम्रो नराम्रो सुधार गर्ने मौका दिनु होला भन्न चाहन्छु । धन्यवाद !